ब्लग के हो र ब्लगबाट पैसा कसरी कमाउने? – kapanonline
ब्लग के हो र ब्लगबाट पैसा कसरी कमाउने?
काठमाडौं ,मंसिर ४ /कमल धिताल
यसका लागि सुरुमा गुगलको ब्लगर, वर्डप्रेसजस्ता निशुल्क साइटमा एकाउन्ट बनाउनुपर्छ ।जस्तैमैले यो मेरो ब्लगकोब्लगर साईटमा बनाएको हो रयोब्लग वर्डप्रेसको साईटमा बनाएको हो जुन यहाँ ले हेरेर आफ्नो पनि सोही अनुसार बनाउन सक्नु हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो चाहनाअनुसारको ब्लग डिजाइन गर्नुपर्छ र लेख्न थाल्नुपर्छ । कमाउनका निम्ति आफूले धेरै भन्दा धेरै पाठक भने तान्न सक्नुपर्छ । किनभने जति धेरै पाठकले आफ्नो लेख पढ्छन् उति नै पटक आफ्नो ब्लगमा आएको विज्ञापन हेर्छन् र आफूले उत्तिकै धेरै कमाउन सकिन्छ । त्यसैले पाठकले रुचाउने लेख लेख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
ब्लगगिङ सबन्धी अन्य जानकारी योब्लगमा गएर लिन सक्नु हुन्छ